वैज्ञानिकको निष्कर्ष : स्थानीय गाईको गहुँतबाट हुन्छ १४८ प्रकारका रो’ग निको ! – " सुलभ खबर "
वैज्ञानिकको निष्कर्ष : स्थानीय गाईको गहुँतबाट हुन्छ १४८ प्रकारका रो’ग निको !
काठमाडौ। स्थानीय गाईको गहुँतबाट १४८ प्रकारका रोग निको हुने वैज्ञानिक अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको छ । गाईको घ्यूले बढेको कोलेस्टोरल ठीक गराउँछ । गोरस मुटुरोगमा समेत लाभदायक रहेको तथ्य वैज्ञानिक अनुसन्धानबाट प्रमाणित भएको छ । रुसी वैज्ञानिक शिरोबीचले मानिसमा हुने रेडियोधर्मी कणको प्रभाव नष्ट गर्ने क्षमता गाईको दूध, दही, घ्यू, गहुँत र गोबरमा हुने अनुसन्धानबाट पत्ता लगाउनुभयो । सन् २०१२ मा अमेरिकन हर्ट एशोसिएशनले स्थानीय गाईको दही सेवन गर्नाले उच्च रक्तचापका रोगीमा ३१ प्रतिशतले कमी आएको तथ्य सार्वजनिक गर्‍यो ।
इन्टरनेशनल कार्डियोलोजी एसोसिएसन, भारतका अध्यक्ष डा शान्तिलाल साहले भैँसीको दूधमा ‘लोङ्चन फ्याट’ बढी भई नशा जमेर अवरुद्ध हुँदा हृद’या’घा’तका समस्या देखापरेकाले गाईको दूध हृदय रो’गीका लागि बरदान सावित हुने अनुसन्धानबाट पुष्टि गर्नुभएको छ । अमेरिकाले गाईको गहुँतमा शोध गरी गोमूत्रबाट बन्ने पाँचवटा औषधिको ‘पेटेन्ट राइट’ लिएको स्थानीय गाईको अध्ययनमा लाग्नुभएका गोव्रती योगी सोमराज बताउनुहुन्छ । भारतले पनि गाईको गोबरमा अनुसन्धान गरी ४८ वटा औषधिको ‘पेटेन्ट राइट’ लिएको छ ।
गाईको घ्यूले हवन गर्दा प्रोपिलिन अक्साइड, इथिलिन अक्साइड, फरमलडिहाइड ग्यास निस्किन्छ । प्रोपिलिन अक्साइडले वर्षा गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ भने इथिलिन अक्साइड र फरमलडीहाइड ग्यासले पर्यावरणमा नकारात्मक असर पुर्‍याउने जीवाणुलाई मारी शुद्धीकरण गर्दछ । यसैले गर्दा गाईको घ्यूको महत्व छ ।
शास्त्रमा भनिएको पनि छ “शास्नादी मत्वंगोत्वं ककुद् वत्वं गोत्वं” अर्थात् जसमा माला र जुरो हुन्छ त्यो नै गाई हो । स्थानीय गाई गोरुमा जुरो हुन्छ। स्थानीय गाई, गोरु प्राकृतिक हुन् भने जर्सी गाई गोरु कृत्रिम हुन् भन्ने तथ्य वैज्ञानिक अनुसन्धानले निक्र्योल गरेको छ ।
इटालीमा प्राजिइ विंगेडले गाईको गोबरमाथि अनुसन्धान गरी यसमा क्षयरोग र मलेरियाका कीटाणुलाई मार्ने अद्भूत क्षमता हुन्छ भन्ने तथ्य पत्ता लगाउनुभयो । नपुंसकता, चिड्चिडापन, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, बाथ, मिर्गौला आदि रोग आधुनिक कृषि प्रणालीका उपज हुन् । बच्चामा एलर्जी भएपछि तारकेश्वर नगरपालिका–७ की सम्झना न्यौपानेले कोहलपुरको गाई फार्मबाट उत्पादन भएको गो अर्क प्रयोग गरेर स्नान गराउँदा निको भएको अनुभव सुनाउनुभयो ।
नेपाल भूमिमा गाई गोठालाबाट द्रव्य शाह राष्ट्रनायक बने । धेरै गाई पाल्ने गोपालवंशी राजाले समेत यहाँ शासन चलाए । आधुनिक नेपालको गोरखा जिल्लाको नामाकरण पनि गोरखनाथ जन्मिएको र गाईको रक्षा गरेकैले हुन गएको हो । गोरक्षाबाट अपभ्रंश भई गोरखा शब्द बनेको विश्वास गरिन्छ । शास्त्रमा भनिएको पनि छ – “यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेसु साधुषु । धर्म मयि च विद्वेष सवा आसु विनश्यति ।” अर्थात् जसले गाईमा, धर्ममा विद्वेष गर्छ त्यो नेपालमा टिक्दैन । पशुपतिनाथ र गोरखनाथको तपस्याको अगाडि कोही टिक्न सक्दैन ।